Bal Daawo Inkaarahaaga! Qalinkii: Maxamed Saleebaan Cumar – Araweelo News Network (Archive)
Bal Daawo Inkaarahaaga! Qalinkii: Maxamed Saleebaan Cumar
Wa`xa la caayayaa kaskaaga iyo garashada suubban ee ka soocda abuurta kale. Haddaa maxaa laguu jaho-wareerinayaa. Waxa la ogaaday goldalooladaada iyo iimaha ku dul gawdiida, waxaana la oddorosay falcelinta aad kaga jawaabi karto qadaf kasta oo laguula badheedho. Waa
lagu halaanbeeyay oo berdaanka ayaa lagu saaray; waa lagu lafoguray, waana lagu dersay. Dharaar sii fogeyd ayaa hoosta laga xarriiqay qabitaannadaada iyo ahdaafta biyo-kama-dhibcaanka u noqon karta masiirkaaga. Waxaad guddo iyo waxaad gashaba waa laga dheregsan yahay, maantana wax kasta oo aad samaysaa waxba kuma biirin karaan baadi-doonka aad ugu jirto nolol tan dhaanta!
Haa. Waad halgantay si aad u xaqiijiso yool aan cidi kuu diran. Waad xiiqday oo waad xabeebatay. Himilo durugsan iyo hilaad fog midna maad astaysane, sidii qori daad la tegay ayuun baad badweyn sabbaysay. Maalintii aad is weyddiisay cidda aad u shaqaynayso iyo sababta aad waxan oo hanfi ah ugu jirtana, cidi kuma dhegaysan. Kii xaafadiina ahaa ee idin hor kacayay markii aad su’aashaas kula dhiirratay, waa kii kugu afwaajiyay: “Dee beryahanba inaad madaxtooyada u dusto waa la sheegayay”. Yaab. Madaxtooyaduna xaggee kuu soo martay! Laakiin maanta waxaad uurka ka tidhaahdaa, mararka qaarkoodna aad ku calaacashaa, “Iska geli lahaydaa!” Adeerkaa maalintaa si adag ayuu kuu waabiyay, waxaanu duqeeyay qofnimadaada, si-araggaaga iyo xorriyadda afkaartaada. Xaqiiqada waxa lagu caabbiyaa xadhkaha been-abuurka, bahdilka iyo dafiraadda.
Intii aad jirtay iyo taxanaha sooyaalkaagaba, xilliyo kala duwan ayaad isku hawshay tacabyo kala duwan. Sidii lagaaga bartay, maantana, mar kale ayaad tasaysay. Libtii aad diif iyo darxumaba ugu dhabar-adaygtay waxay kaaga baahnayd daryeel iyo tooggo-hayn. Waxay kaaga baahnayd ilaalin, il-ku-dhawris iyo dabagal joogteysan. Laakiin markii aad intaasba ka hawlyaraysatay, ee aad duhur cad ka seexatay ayay dubur hawd ka xushay! “Gunti furey nin caashaqay haddii, guudka loo sudho’e,” Waxaad isku qancisay; “Labada sanno ee hore yaan waxba laga sheegin”. Ma taqaannid sababta sidaas loo yidhi, waxaad se maqashay qaar sidaas uun ku halaanhalaya oo waad ku ayidday. Dalagdalagta Raacdeyntaadu waa goor xeedhiyo fandhaal kala dhaceen oo aanad karaan u lahayn inaad aqbasho runta mutaxan iyo guul-darrooyinka ku hor tuban. Haddii labadaasiba ku dhammaadaan wax aan ahayn wixii aad u golongoshay, ma wax baad istifiidday? Sow daal uun maad korodhsannin? Ma sidaasaad weliba ku doonaysaa inaad adduunyada kaga mid noqoto? Mise taas diyaarba uma tihide, waa meexaanaha aad nafta ku madadaaliso. Maxaad u ilduuftay meerisyadii ahaa: “Hadba soo gadaal eeg ninkaad, gadato hiilkiisa”. Dee mooyidaada!
Published March 25, 2012 By info
Xil-Ka Xayuubinta Iyo Xabsi Geynta Deg-dega Ahi Waa Xaallad Abuur Aan Loo Meel Deyin, By. Caamir Jamaac
Munaasibad Lagu Daah -furayey Adeega 3G Ee shirka Isgaadhsiinta Somtel Oo Lagu Qabtay Jaamacadda Nugaal Ee Laascaanood